Vary moran-dRajoelina Efa propagandy sady famonoana ny tantsaha
Antenimierandoholona 11 volana, tsy voatendry ny solon’i Mbade Jeannine
63 ny isan’ireo Loholona mandrafitra ny Antenimierandoholona, izay andrimpanjakana faharoa eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara.
Tsy fanarahana ny toromarika Mila mandini-tena ny mpitondra fanjakana
Tao anatin’ny 3 andro niverenan’ny fihibohana tapak’andro izao no nahitana fa sarotra ho an’ny olom-pirenena ny tsy hifanaretsaka amin’ireo toerana fitadiavany isan’andro. Isotry, 67ha, Ambanidia,
Hemerson Andrianetrazafy –mpahay tantara “Marefo sy tsy tsara faka ny demokrasia eto”
Rehefa tsy eo amin’ny fitondrana ireo nitondra taloha vao mody misaina, hoy ny mpahay tantara, Hemerson Andrianetrazafy.
Fanadihadian’ny fahitalavitra Ivorianina “Henatra ho an’i Afrika i Andry Rajoelina”
Nanao fanadihadiana sy fakan-kevitra tamin’ny mponina any aminy mahakasika ny tambavy Covid-Organics na CVO ny fahitalavitra Ivorianina NTV. Hita izao fa tsy mahomby io fanefitra io,
Fetim-pirenena Frantsay Tsy hisy ny lanonana samihafa
Noho ny fihanaky ny aretina covid-19 maneran-tany dia mbola maro ireo firenena no mandrara ny famoriam-bahoaka.
Alain Andriamiseza “Tsy mino ny mpitondra intsony ny vahoaka”
Tsy nazava ny politika napetraky ny fitondram-panjakana hitantanana ity aretina ity matoa misy fiverenana amin’ny fihibohana efa ho tanteraka indray, hoy ny mpanao politika, Alain Andriamiseza.
Tonga tao Toamasina ny sabotsy teo ny sambo mitondra vary mora milanja 16 500 taonina nafaran’ny fanjakana Rajoelina avy any Karachi-Pakistan. Ny 10 000 taonina amin’io dia nampidinina ao Toamasina, ary halefa any Toliara kosa ny 6 500 taonina ambiny. Ny 19 janoary no nilazana fa efa any anaty sambo ny vary mora.
Araka ny fampanantenana sy velirano, dia tonga ny vaovao mahafaly, hoy i Andry Rajoelina, izay tonga tao Toamasina omaly. Hozaraina, hamidy amin’ny vidiny mora amin’ny olona tena sahirana manerana an’i Madagasikara. Tsy hoe vary kalitao farany ambany, fa tena farany ambony, hoy izy. Andeha hiverenana ny fanehoan-kevitr’Atoa Rabekoto Honore Auguste na “Bekoto” mpanakanto ao amin’ny tarika Mahaleo sady mpahay fiarahamonina izay nilaza hoe: “"Tsy mila vary mora avy any ivelany izahay fa ny vary gasy sy makalioka vokatra eto an-toerana vidina dia ataovy vary mora amin'ny vahoaka. Aza vonoina ny mpamokatra Malagasy Tompoko". Tsy ny vary mora no ratsy, ary misy ampahana Malagasy mety mila izany tokoa. Fa mba manao ahoana kosa izany ny vokatry ny tantsaha izay nandaniana ron-doha sy fotoana, izay be mason-karena tokoa. Amin’ny lafiny iray, dia famonoana an-kitsirano ny tantsaha izao satria tsy maintsy halatsaka izany ny vidin’ny azy. Mila mandray fepetra mifandraika amin’io zavatra nataony io ny fanjakana amin’ny fijerena ny tantsaha 80% amin’ny Malagasy, toy ny fanampiana ara-bola na “subvention” noho ny fatiantoka mety hisy ohatra, na ny fampitaovana ara-pamokarana, ka ny azy ireo no vidiana raha hividy ihany,… Mibaribary ny ambadika politika satria hiditra amin’ny fifidianana solombavambahoaka isika. Mitovy amin’izao rahateo no natao tamin’ny tsena mora nandritra ny propagandin’ny filoha.